ကြံ့ခိုင်ရေး Wear, ယောဂဘောင်းဘီ, အားကစားဝတ်စုံ, Boxer အကျဉ်း, အမျိုးသားများအတွက် Jacket - Westfox
ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြဆန်းသစ်စတိုင်တက်အပြည့်အဝဇစ်နှစ်သိမ့်ရာပူဇော်သက္ကာကိုနှင့်သင့် silhouette အလေးအနက် ပြု. , ရှိသမျှခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမျိုးစုံဘို့ဖန်ဆင်းခဲ့သည် 1.This ။ ယလေ့ကျင့်ခန်းများယောဂ, လေ့ကျင့်ခန်း, အားကစားရုံ, ကြံ့ခိုင်ရေး, running, မည်သည့်အမျိုးအစား, ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော activewear ။ 2.Women ရဲ့လမ်းကြောင်းဂျာကင်အင်္ကျီကမ်းလှမ်းမှုလက်မတွင်းကိုလက်လွှမ်းခြုံနှင့်နွေးထွေးမှုနဲ့ running သို့မဟုတ်ထွက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းသင်သည်သင်၏ဥစ္စာ stash နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘက်အိတ်ကပ်တိုးမြှင့်ဖို့။ တစ်ဦးကရောင်ပြန်လိုဂိုညမှာသငျသညျဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်မယ့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတားအဆီးဖန်တီးပေးပါတယ်။ ထို့အပြင်, ဒီည ...
ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြ 1.Inner Pocket 2.Side running သို့မဟုတ် squating စဉ်ကဆင်းလျှောပါဘူးကြောင့် 3.Gusseted Crotch 4.Flatlock ချုပ်ရိုး 5.Tummy ထိန်းချုပ်မှု waistband Pockets ။ ဒါဟာသင်တစ်ဦး်ကြည့်ပေးခြင်း, သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှဿုံပုံ။ 6.Breathable, ချွေးစုပ်ပြီးမြန်ဆန်-ခြောက်သွေ့။ ထို့အပြင်တစ်ဦး gusset crotch ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်စေသောယားယံ minimize လုပ်ဖို့အခမဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့် interlock ချုပ်ရိုးတိုးမြှင့်ဖို့။ ဒါဟာအားလုံးနေ့ကအဆင်ပြေသင်စောင့်ရှောက်။ 7.INTIMATE Pocket: သင်ယောဂသို့မဟုတ် workou လုပ်နေလုပ်နေသည့်အခါ ...
Active ကိုယောဂချောမွေ့စွာမြင့်မားခါးလောက်နှစ်ဦး Piece Leggi ...
ယောဂ Spandex က Short
OEM & လိမ္မော်ရောင်ထုတ်လုပ်သူ
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများနှင့် Trading Company ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ & Certificate
Long Sleeve Swimwear, Swim Shorts Trunks, Swiming Dress, Drying Swim Trunk, စက်ဘီးအဝတ်အထည် , Sportswear Jersey,